SAM ကို-ဗြိတိန် - ဗီနိုင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » ဗီနိုင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
views:1 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-09 မူလ:ဆိုက်ကို
ဤဆောင်းပါးကိုကိုမြင်လျှင်, သင်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီရမယ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး။ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သက်တမ်းနှင့်အဗေဒ၏ပြုပြင်မှုများများအတွက် ပို. ပို. လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်လာရသည်။ အများဆုံးကုမ္ပဏီများမှတပ်ဆင်န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်နေစဉ်, ကဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနှငျ့သငျရှေးခယျြသငျ့သညျအရာ type ကိုခြံစည်းရိုးကိုသိရန်အရေးကြီးပါတယ်:ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး, တစ်ပိုင်းပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုး, ဗီနိုင်း picket ခြံစည်းရိုး, ဒါမှမဟုတ်ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုး, etc
သငျသညျကို install လုပ်ဖို့လိုတဲ့အလျားနှင့်ခြံစည်းရိုး၏အမြင့်ကိုတိုင်းတာပါ။ သငျသညျစျေးနှုန်းကိုးကားစစ်ဆေးတဲ့အခါသင်ဤအချက်အလက်သည်ဟုမေးပါလိမ့်မည်, ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်မည်မျှခြံစည်းရိုး၏ခွထောကျကိုသိသင့်ပါတယ်။
1. သင်ကစျေးဝယ်စတင်ခင်မှာ, အရည်အသွေးခြံစည်းရိုးများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်နှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပါ။
2. သင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးရဲ့အောက်ခြေလူမီနီယမ်သို့မဟုတ်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိထောက်ခံမှုရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဤသည်သတ္တုသင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးဖြောင့်ဖြစ်နေဆဲဆိုတာသေချာပါလိမ့်မယ်။ သစ်သားထောက်ခံမှုခြံစည်းရိုးအတက်အကျစေပါလိမ့်မယ်။ သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိအပြင်, သံမဏိအထောက်အကူသံချေးနိုင်ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှယိုယွင်း။
3. ခြံစည်းရိုးပိုမိုတာရှည်ခံအောင်နှင့်ချိုတားဆီးတံ့သော, ထူသောခြံစည်းရိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
4. ရေရှည်တည်တံ့စေခြင်းငှါကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါဗီနိုင်းလုံးပတ်ကောင်းသောအရည်အသွေးဖြစ်သော်လည်းကြောင့်အသေးစားပြဿနာများရှိလိမ့်မည်ဟုမလွှဲမရှောင်သည်။ သင့်ရဲ့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကုမ္ပဏီအချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ကိုင်မနိုင်လျှင်, သင်ပြုပြင်ရေးနှင့်အတူအချို့သောဒုက္ခနိုင်ပါသည်။
ကြှနျုပျတို့၏ website တွင် 1. ကိုသင်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် privacy ကို, Semi-privacy ကို, မြင်းခြံစည်းရိုးသို့မဟုတ်အလှဆင်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးရွေးချယ်နိုင်သည်။
2. သင်ကလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ တစ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကို install လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာတိုးတက်မှုလုပ်ဖို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်, သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
စက်ရုံလက္ကား / တိုက်ရိုက်ခြံစည်းရိုးကုမ္ပဏီများမှကနေအွန်လိုင်းရှာရန်
ဒီကြီးမားတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးသင်ခြံစည်းရိုးကိုယ့်ကိုယ်ကို install လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်, ဒီကိုဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ဧရိယာအတွင်းရှိဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကုန်သည်ကိုဆက်သွယ်ပါစေလိမ့်မည်ဟုအချို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကိုးကားတောင်းဆိုရန်ပြီးနောက်သူတို့သည်သင်၏အီးမေးလိပ်စာသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုပြီးသငျသညျကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏လုပ်ငန်းလိပ်စာထက်အခြားအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုအသုံးပြုပါ။
1. ခြံစည်းရိုးပို့စ်များကိုနှင်းခဲနက်ရှိုင်းကိုအောက်တွင်ထားရှိရပါမည်။ ဒီအတိမ်အနက်ကိုသင့်တည်နေရာကိုအပေါ်သို့မူတည်ပါလိမ့်မယ်; သို့သော်သင်သည်ရာသီဥတုအေးပြီးနောက်မရှိတော့တည်ငြိမ်ဖြစ်ကြောင်းခြံစည်းရိုးပို့စ်များကို install လုပ်ပါမှရှောင်ရှားရန်သင့်အတိမ်အနက်အတွက်အတိအကျဖြစ်သင့်သည်။
2. သိပ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ခြံစည်းရိုးတိုင်ကဏ္ဍများကို install လုပ်မထားပါနဲ့။ သူတို့ကအပူနှင့်အစိုဓာတ်အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူရွှေ့ဖို့အချို့သောအခန်းကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအတိုင်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သူတို့ကိုတပ်ဆင်ရန်မှန်ကန်သောလမ်းမသေချာလျှင်, တပ်ဆင်ခြင်းအပေါ်ကိုးကားရ။
3. ဒီနှင်းခဲ၏အမှု၌တည်ငြိမ်ခြံစည်းရိုး post ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ သူတို့ကိုသင်စေလိုလျှင်
ရာသီဥတုပွောငျးလဲနေသောအခါပူသို့မဟုတ်အအေးရာသီဥတုဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Installing ရွှေ့နှင့်ဖျက်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအပူချိန်ကိုစဉ်းစားပါနဲ့အကောင်းတစ်ဦးတပ်ဆင်ခနေ့စွဲကိုရွေးချယ်ပါ။ ရာသီဥတုပွောငျးလဲနေသောအခါပူသို့မဟုတ်အအေးရာသီဥတုဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Installing ရွှေ့နှင့်ဖျက်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအပူချိန်ကိုစဉ်းစားပါနဲ့အကောင်းတစ်ဦးတပ်ဆင်ခနေ့စွဲကိုရွေးချယ်ပါ။
ဗီနိုင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲ Buy ဗီနိုင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲဝယ်အကြံပေးချက်များ ယ်ယူရန်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏အကြံပေးချက်များ